वेदमा राजनीतिक दर्शन...
देशको आवश्यकता ...
२०७८ साल वार्षिक राशिफल
वर्षको प्रारम्भमा खर्चभावको महसुस हुनेछ । वृहस्पतीले धार्मिक कार्यमा खर्च बढ्नेछ । मनमा खिन्नता बढाउने छ । आफन्त सँगको सम्बन्धमा खटपट हुने देखिन्छ । सहयोगीसँग अनावश्यक विवाद हुन सक्ने छ । स्वास्थ्यमा समस्या आउने छ । कष्टकर यात्रा गर्नु पर्ने हुनसक्छ । विद्यामा वाधा आउने देखिन्छ । शरिरका अंगमा चोटपटक लाग्न सक्छ । पूजा,जप,पीपललाई जल चढाउने,कुकुर,माछा,परेवालाई खाना दिने गर्नु लाभदायक रहने छ । शनि को आुकुल प्रभावले कार्यमा सफलता मिल्ने छ । वर्षान्तमा विशिष्टजनको सम्पर्कले आर्थिक लाभ दिलाउने छ । व्यापार व्यवसायमा सफलता मिल्ने छ । आफन्त मान्यजनसँगको कारोवारमा प्रशासनिक व्यवधानको सामना गर्नु पर्ने छ । रोजगार प्राप्त हुनेछ राजनैतिक,सामाजिक,न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्ने छ । माङ्गलिक कार्य हुनेछन् । तुलनात्मक रुपमा श्रावण,भदौ,पुष र चैत्र महिनामा व्यवसायिक बाधा,व्यवधानको सामना गर्नु पर्ने छ । वर्षान्तमा पराक्रम बढ्ने देखिन्छ ।
विरोधका बावजुुुधपनि प्रसंसनिय कार्यको सुरुवात हुनेछ । वृहस्पतिको अनुकुल प्रभावले शैक्षिक क्षेत्रमा लगानीको अवसर प्राप्त हुने छ । आध्यात्मिक कार्यमा लगाव घट्ने छ । अध्ययन अध्यापनमा रुचि बढ्नुकासाथै प्रसंसनिय शैक्षिक कार्य हुनेछन । व्यापार व्यवसायमा उतारचढाव हुनेछ । राजनीतिक तथा न्यायिक क्षेत्रमा नेतृत्वको अवसर प्राप्त होला । अढैया शनि प्रभावले फजुल खर्चबढनुका साथै शत्रु बढ्ने,आफन्तमा कलह र चोटपटक को सम्भवना बढ्नेछ । अन्तर जातिय प्रेम प्रसङ्ग चल्ने देखिन्छ । शनिको दुष्प्रभावबाट जोगिन शनिको जप,पूजा,तिलको तेलमा दियो बाल्ने जस्ताकार्यले सकारात्मक उर्जा बढ्नेछ ।। दाम्पत्य जीवन शंका,अविश्वास आउने छ । आफन्तजनको स्वास्थ्योपचारमा आर्थिक बोझ बढ्ने छ । परिवारमा मांगलिक कार्य हुने छ । तीर्थयात्राको योग छ । आषाढ,कार्तिब,मंसिर र फागुन महिना आर्थिक रुपले कमजोर रहनेछन । व्यवसायिक सफलताका दृष्टिले वैशाख,भदौ र पुस लाभदायक छन ।
यो राशि हुनेहरुका लागि वर्ष अढैया शनिदशाको प्रभाव रहने छ । अध्ययन अध्यापनमा अवरोधको सामना गर्नु पर्नेछ । सामाजिक पद प्रतिष्ठामा आंशिक गीरावट आउला । स्वास्थ्यमा उतारचढाव आउने देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा गतिरोधको सामना गर्नु पर्ने छ । परिवारका सदस्यको स्वास्थ्योपचारमा धनराशी खर्च गर्नु पर्ने छ । दाँत आँखामा समस्या आउला । जग्गा,भवन जस्ता अचल सम्पत्तिको विवादले पिरोल्ने छ । छरछिमेकी,आफन्तसँग मुद्दामामिला पर्ने योग छ । जसको जन्मकुण्डलीमा शनिको प्रभाव शुभ छ,त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई वैदेशिक यात्राको अवसर मिल्नेछ । कृषि व्यवसायमा लाभ मिल्ने छ । धार्मिक कार्यमा समय व्यतीत हुनेछ । जागिरमा पदोन्नति हुने छ । राजनैतिक कार्यमा प्रभाव बढ्ने छ । नयाँ आय मूलक कार्यको थालनी हुने छ । सन्तान प्राप्तिको योग छ । प्रेम प्रस्ताव आउने छ । आर्थिकदृष्टिले जेठ,असौज,कार्तिक र फागुन महीना आर्थिकरुपमा सवल रहने छन् । भैरव उपासना गर्नाले स्परण शक्ती तेज हुनेछ ।
यो राशि हुनेहरुका लागि वर्षको पूर्वाद्र्ध सफलताले भरिपूर्ण रहनेछ । आफन्तहरुको सहयोगले थालेको व्यापार व्यवसायमा सुधार आउने देखिन्छ । मातापिताको सहयोग पाइनेछ । आय आर्जनमा सुधार आउने छ । अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ । जागिरमा पदोन्नति हुने छ । वैदेशिक यात्राको योगहरु बन्नेछन । धार्मिक कार्यमा समय व्यतीत हुनेछ । जग्गा,भवन,गाडी जस्ता सामाग्री जोडिने छ । ग्रहको नकरात्मक प्रभावले राजनैतिक कार्यमा गतिरोध आउने छ । वैदेशिक रोजगारमा समस्या आउला । अनावस्यक खर्चमा नियन्त्रण गुमाउँदा ऋण बढ्ने छ । आर्थिक वाणिज्य व्यापारमा गतिरोध आउने छ । विश्वासपात्रबाट प्रशासनिक कार्यमा धोका पाइने छ । पुराना मुद्दा मामिलाहरु व्यूतने योग छ । व्यवसायिक दृष्टिले वैशाख,भदौ,पुष, महिना नकारात्मक फलदायक छन् । वर्षको मध्यमा भने भाग्य सबल रहनाले जीवन साथीको सामिप्यता प्राप्त हुनेछ । शारीरिक प्रतिभाको उच्च मुल्यांकन हुनेछ ।
यो राशि हुनेहरुका लागि वर्ष मिश्रित फलदायक रहने छ । वौद्धिक क्षेत्रमा शुभ रहने छ । अधुरा कामहरु बत्राले मन प्रसत्र हुनेछ । संघर्षले कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ । औद्योगिक आयमूलक कार्यमा सफलता मिल्ने छ । स्वास्थ्यमा सुधार आउने छ । सामाजिक कार्यमा वौद्धिकताको मुल्यांकन हुनेछ । शत्रुले समस्या सिर्जना गर्दिनाले अनावश्यक तनाव बढ्ने छ । दाम्पत्य जीवनमा विश्वासको संकट आउला । नोकरीमा अनावस्यक झन्झटको सामना गर्नु पर्ने छ । वर्षको अन्त्यमा जग्गा,भवन,सवारी साधन जोडिने छ । न्यायिक पक्ष कमजोर देखिए पनि विजय प्राप्त हुने छ । नयाँ कार्य गर्ने अवसर मिल्नेछ । वैदेशिक यात्राको योग रहेकोछ । प्रियजनहरुको सहयोग प्राप्त हुनेछ । आर्थिक हिसावले आषाढ र असौज, महिना कमजोर रहेपनि अन्य महिना शुभ रहने छन् । पैतृक सम्पति प्राप्त हुनेछ । मान्यजनको सहयोग मिल्नेछ । प्रेम प्रस्ताव ले आकर्षण बढ्नेछ । शैक्षिक कार्य सफल हुनेछन् । परोपकारको भावनाले समाजमा स्थापित गराउने छ ।
यो राशि हुनेहरुका लागि नयाँवर्ष शवल र सफल रहने छ । स्वास्थ्यमा सुधार आउने छ । धर्मकर्ममा रुचि बढ्नेछ । सामजिक कार्यमा सफलताहरु मिल्ने छन् । वैदेशिक व्यापारमा लाभ रहने छ । वैदेशिक रोजगारीको तयारी बढ्ने छ । कृषि व्यवसायमा लाभ मिल्ने छ । अधुरा कार्यहरु पूरा हुने छन् । उच्चतम तहको अध्ययन अनुसन्धान पुरा हुने छ । राजनैतिक क्षेत्रमा लाभ,हानी मिश्रित रहनेछ । श्रावण महिनाबाट विद्याभावको राहुले अध्ययन अध्यापनमा मन जाने छैन । शैक्षिक क्षेत्रको लगानीमा मन्दि आउने छ । दाजुभाइ दिदीबहिनीबीच सद्भाव बढ्नेछ । जग्गा,घर,वाहन व्यवसायबाट प्रसस्त लाभ हुनेछ । नयाँ कार्यको थालनी हुने छ । जेठ,भाद्र र पुस महिना लाभदायक छन् । अढैया शनि दशा रहेकाले सवारी साधन र हतीयार चलाउदा सावधानी अपनाउनुपर्ने छ । अनावश्यक लान्छना लाग्नसक्छ । आय आर्जनका नयाँ श्रोत हरु फेलापर्लान । आफन्त र साथीभाई को सहयोग प्राप्त हुनेछ । संघर्षका कार्यले इच्छाशक्ति बढ्नेछ ।
अध्ययन अध्यापन,परिक्षा,वैदेशिक यात्रा,उत्पादानात्मक कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ । बर्षको पूर्वार्धका महीनाहरु संघर्षमय रहनेछन् । आफन्तको सहयोग मिल्नाले घरपरिवारमा राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुने छ । घरमा मांगलिक कार्य हुने छन् । तुला राशि हुनेहरुकालागी जेठ देखि मंसीर सम्मका महिनाहरु मानसिक र शारीरिक रुपमा केही कष्टदायक रहनेछन । भाद्र महिना पछि भने वृहस्पतिको अनुकुलताले शैक्षिकक्षेत्र र वौदिकक्षेत्रमा आंशिक सुधार आउनेछ । राजनैतिक कार्यमा विश्वासको संकट हट्दै जाने छ । रोजगारीका साथै पदोन्नति हुने योग छ । प्रशासनिक झमेलाले बन्नलागेका कार्यमा बाधा उत्पन्न हुने देखिन्छ । तुलनात्मक रुपमा वैशाख,श्रावण,मंसिर,चैत महिना स्वास्थ्यकालागी प्रतिकुल रहनेछन् भने असार,असौज,माघ र फाल्गुन महिना लाभदायक रहने छन । स्थान परिवर्तनको सम्भावना बढेर जानेछ । अढैया शनिको प्रभावले शारीरिक कष्ठ र स्वास्थ्यमा आंशिक समस्या देखा पर्न सक्ने छ ।
यो राशि हुनेहरुका लागि नयाँवर्ष शुभफलदायक छ । व्यापार व्यवसायमा अपेक्षित लाभ मिल्ने छ । औद्योगिक क्षेत्रमा सहकार्य हुनेछन् । पारिवारिक मेलमिलाप बढ्नाले व्यवासायमा प्रगति हुने छ । आम्दानीका नयाँ श्रोत देखा पर्ने छन् । कृषिकार्यमा लगानीको संभावना बढेर जानेछ । वर्षको पूर्वाद्धमा आकस्मिक धनलाभ हुनेछ । सामाजिक कार्यमा मानसम्मान प्राप्त हुने छ । वैदेशिक यात्राबाट लाभ मिल्ने छ । धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्ने छ । वर्षको पूर्वाद्र्ध मानसीक,शारीरिक र आर्थिक रुपमा कमजोर रहनेछन । अन्त्य अढैया शनिदशाले कार्यमा ढिलासुस्ती हुनेछन् । उत्तराद्र्धमाभने केहीलाभ रहनेछ । पैतृक सम्पत्तिको विवाद आउला । पारिवारिक सम्बन्धमा मतभेद आउने छ । आम्दानीको श्रोत दुर्वल बत्रेछन् । व्यापार व्यवसायको प्रगतिमा शिथिलता आउला । भूमिजन्य कारोवारमा दैविक प्रकोपको सामना गुर्न पर्ला । प्रेम प्रस्तावले उर्जा बढ्नेछ । वर्षका श्रावण,कार्तिक,फाल्गुन र चैत्र महिना लाभदायक रहनेछन् भने जेष्ठ,भदौ र मंसिर महिना स्वास्थ्वयकालागी प्रतिकुल रहनेछन् ।
यो राशिकालागी योवर्ष मध्यम फलदायी वर्ष रहेको छ । अध्ययन अध्यापनमा सुधार आइ सफलता मिल्ने छ । बोलीको प्रभाव बढ्नाले मित्र बढ्नेछन् । मातापिताको आशिर्वादले विशिष्ट कार्यको थालनी हुने छ । आफन्तको सहयोगले आंसीक कार्य सफल रहनेछन् । सामाजिक कार्यमा सफलता मिल्ने छ । प्रेमभाव बढ्नाले सत्रु पराजीत हुनेछन् । वर्षको पूर्वाद्र्धमा अध्ययन अध्यापनमा विघ्नबाधा रहेपनि उत्तराद्र्धमा भने प्रगति हुनेछ । अनावश्यक यात्राहरु हुनेछन् । रोजगारी र पदोन्नतिको क्षेत्रमा केहि विघ्न बाधा देखा पर्नेछन् । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्ने छ । जग्गा जमिन सम्बन्धि व्यवसायमा प्रशासनिक अवरोध आउला । अनावस्यक खर्चमा नियन्त्रण आउनेछन् । न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्ने देखिन्छ । विरोधीहरु सहयोगी बनेर देखा पर्लान् । धार्मिक कार्यमा तर्क गर्ने मनोभाव बढ्ने छ । परीक्षा,अन्तर्वार्तामा अवरोधको सामना गर्नु पर्ने छ । यो राशिको लागि वैशाख,जेष्ठ,भाद्र र मंसिर महिना लाभदायक रहनेछन् । यो राशि हुनेहरुका लागी योवर्ष अन्त्य शाढेसाति दशा रहेकाले केही सचेत रहनुनै उचित रहने छ ।
यो राशि हुनेहरुका लागि मिश्रीत फलदायी रहेको छ । धार्मिक कार्यमा लगाव बढ्ने छ । वैदेशिक व्यापारका दृष्टिले फलदायक रहने छ । धेरै समयदेखि अल्झिएका कार्य हरु सुचारु हुनेछन् । अध्ययन अध्यापनजन्य कार्यको थालनी हुनेछ । विश्वासपात्रबाट धोका पाइने देखिन्छ । सन्तानको सहयोगले अधुरा कामको झन्झटबाट छुटकारा मिल्ने छ । जागिरमा पदोन्नतिको योग रहेको छ । स्थानान्तरणको सम्भावना बढेर जानेछ । प्रेममा पर्नुहुने छ । आफन्तजनको स्वास्थ्यमा उतारचढाव आउने देखिन्छ । रोजगारीको नयाँ स्रोत फेला पर्ने छन् । धार्मिक कार्यमा धन खर्च हुनेछ । अचल सम्पत्ति जोडिने योग छ । शत्रुले कार्यमा बाधापुर्यान सक्छन सचेत रहनुहोला । धनभावको राहुले वर्षको पूर्वार्धमा अनावश्यक खर्च हुनेछ । मकर राशिलाई यो वर्ष आद्य शाढेसाती दशा रहेकाले परिस्थिती अुनुकुल बन्दैजाने छ । तुलनात्मक रुपमा आश्विन,वैशाख,पुष महिना लाभदायक रहनेछन् । वोलीको प्रभाव बढ्नेछ । शैक्षिक प्रतिष्पर्धा हरुमा विजयप्राप्त हुनेछ ।
यो वर्ष उत्साहजनक तरिकावाट सुरुहुनेछ । समाजिक कार्यमा प्रसंसा प्राप्त हुनुका साथै स्वास्थ्यमा सुधार आउने देखिन्छ । रोजगारीमा व्यवधानको सामना गर्नु पर्ला । संघर्षबाटै कार्य स्थापित गर्नुपर्न छ । वृहस्पतिको प्रभावले वर्षारम्भ सुभदायक रहने छ । प्रशंसा योग्य कार्यको जिम्मेवारी प्राप्त होला । प्रेम प्रस्तावले चञ्चलता बढ्नेछ । राहुको प्रतिकुल प्रभावले मित्रजन सँग दुरी बढ्नेछ । सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्छ । न्यायिक कार्यमा प्रशासनिक अल्झन आउने भएपनि विजय प्राप्त हुने छ । वर्षको उत्तराद्र्धमा अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्ने छ । सन्तान प्राप्तिको लागि गरिएका प्रयास सफलोन्मुख हुने छन् । धनधान्यमा वृद्धि हुने छ । विदेश व्यापार एवं कृषिकार्यमा लाभ मिल्नेछ । भूमि वाहनको सुख प्राप्त हुने देखिन्छ । मातापिताको सहयोगले महत्वपूर्ण कार्य बत्रेछ । रोजगारीको नयाँ अवसर मिल्नेछ । जडिबुटिजन्य कार्यमा सफलता मिल्ने छ । आद्य शाढेसातीदशा रहेकाले श्रावण,मार्गशीर्ष,चैत्र मास तुलनात्मक रुपमा कष्टदायक रहनेछन् ।
वर्षको पुवाद्र्धमा र मध्य मीश्रीत फलदायी रहनेछ । वर्षको पूर्वाद्धमा अध्ययन अध्यापनमा मन जानेछ । अर्थपूर्ण यात्राको अवसर प्राप्त हुनेछ । रोजगारीमा पदोन्नति हुनेछ । प्रेममा अविश्वास बढ्नसक्छ । स्थान परिवर्तनको योग देखिन्छ । औद्योगिक उत्पादनमूलक कार्यमा सन्तुष्टि मिल्नेछ । मनमा उत्साह बढ्नेछ । दाम्पत्यजीवनमा उत्तरचढाव बढ्नेछ । सामाजिक मानसम्मान बढे पनि शत्रुको सामीप्यता ले चिन्ता बढन सक्छ । शैक्षिक उपलब्धिले सम्मान प्राप्त हुनेछ । वर्षको मध्य र अन्त्यमा शनिको प्रतिकुल प्रभाव ले चोट पटक लाग्न सक्छ । मंशीरपछी भने अनावस्यक रुपमा खर्च वृद्धि हुने छ । वाणिज्यव्यापारमा अवरोध आउने छ । कृषिव्यवसायबाट अपेक्षित लाभ नहोला । वैदेशिक यात्रामा प्रशासनिक अवरोध आउने छ । आलस्यताले आर्थिक दृष्टिले वैशाख,भदौ,पुष लाभदायक नहोलान् । तुलनात्क हिसाबमा यो वर्ष मिश्रीत फलदायी रहनेछ ।
हन्ति वातं तदम्लत्वात् पित्तं माधुर्यशैत्यतः । कफं रुक्षकषायत्वात् फलं धायास्त्रिदोषजित् ।। हरीतक्यामलकविभीतकानि त्रिफला । त्रिफला कफपित्तघ्नी मेहकुष्ठ विनाशिनी ।। जात्यामल कुमुस्तानि तद्धन्ववय वासकम् । विवद्वदोषों ज्वरितः कषायं सगुणं पिवेत् ।। आमलकीहरीतकी पिप्पल्यश्चित्रकश्चेति । आमलक्यादिरित्येष गणः सर्वज्वरापह ।। अम्लं समधुरं तिक्तं कषायं कटुकं सरम् । चक्षुष्यं सवदोषघ्नं वृष्यमामलकी फलम् ।। परिचय ः जडीबुटीहरूको महवको बारेमा चर्चा गर्दा अमलाको चर्चा अनिवार्य देखिन्छ । किनकि अमला विभिन्न रोगहरूको विनाशकका रूपमा हामीमाझ परिचित छ । अमला नेपालका सबैजसो जङ्गल या उद्यान, बगैँचामा सर्वसुलभ छ
Posted By: vedicdarpanKeep Reading0 Comments
Dr. Basudev Krishna Shastri has dedicated his life to guide people using his knowledge of the vedas.
हन्ति वातं तदम्लत्वात् पित्तं माधुर्यशैत्यतः । कफं रुक्षकषायत्वात् फलं धायास्त्रिदोषजित् ।। हरीतक्यामलकविभीतकानि त्रिफला । त्रिफला
Posted By: vedicdarpanKeep Reading
डा. वासुदेवकृष्ण शास्त्री संस्कारले युक्त, कहिल्यै पनि संस्कारले सिद्ध गर्नु नपर्ने । (सं+कृ+क्तः) लक्षणोपेतम् ।
जानकी मन्दिर जनकपुरधामको राममन्दिरभन्दा उत्तरपूर्व धनुषसागरको पश्चिमोत्तर कोणमा जानकीमन्दिर अवस्थित छ । महाभारत युद्धपछि गुप्त
वैदिक ज्ञान विज्ञान केन्द्र, अध्यक्ष वैदिक वस्त्र वैदिकहरुको सबै भन्दा प्रचीन र सुव्यवस्थीत वस्त्रधारणको विधान
– डा. वासुदेवकृष्ण शास्त्री राजनीति शब्दले राष्ट्रलाई सञ्चालन गर्ने नीति निर्माण, नागरिकका गतिशील जीवनपद्धति र
नववर्ष– नुतन, उत्साह, उमङ्ग र उत्सवको पर्व हो । कृषि, वनस्पति, रहनसहन र मानवीय जीवनसँग
November 12, 2018वेदमा राजनीतिक दर्शन
– डा. वासुदेवकृष्ण शास्त्री राजनीति
November 12, 2018वैदिक कालगणना र नयाँ वर्ष
नववर्ष– नुतन, उत्साह, उमङ्ग र
November 12, 2018राष्ट्रियता र वैधानिक राष्ट्रसभा
आयातीत र प्रायोजित वाद, पन्थ
November 12, 2018वेद र मानव शरीर संरचना
November 12, 2018गुर्जाे / अमृता
November 12, 2018किन ? का वैदिक वैज्ञानिक कारणहरू
—वासुदेवकृष्ण शास्त्री विवाहको साइत किन
November 12, 2018रुद्राक्ष महात्म्य
November 12, 2018वैदिक कर्मका वैज्ञानिक आधार
व्रत किन ? शरीरको माध्यमबाट
November 12, 2018कृषि कार्य